Banaanbixii Jaaliyada DDSI Ee Wadanka Belgiumka - Cakaara News
Banaanbixii Jaaliyada DDSI Ee Wadanka Belgiumka
Brussels (Cakaaranews) Arbaco, 28ka September 2016. Jaaliyada kasoo jeeda DDSI ee kunool wadanka Belgiumka ayaa maanta banaanbax balaadhan oo ay kaga soo horjeedaan ururada nabadiidka ah sida Ginboot7, ONAG, Alqushaash, UBBO iyo wixii lahalmaala kasamaysay caasimada wadanka belgiumka ee magaalada Brussels iyagoo dareenkooda kumuujiyay sida ay uga xun-yihiin ururadan raba inay dalkeena itoobiya dib ugu soo celiyaan nidaamyadii cabudhiska, cadaadiska iyo dhiig-miiradkii dhargiga uu waa hore gabbalkoodu dhacay ee kiniisadaha looga talin-jiray ee diidan nidaamka federalismka ah iyo dastuurka dalkaba.
Dadka isugu soo baxay banaanbaxan ayaa kudhawaaqayay ‘Ginboot7 down, Onag down, alqushaash down iyo ubbo down.’ Kuwaas oo macnahoodu yahay ‘hadhacaan ginboot7, Onag, alqushaash iyo Ubbo’ iyagoo dhanka kalana ay boodhadhkooda kuqoraayeen islamarkaana kudhawaaqayay ereyo ay kutaageerayaan nidaamka federalismka ah ee kudhisan dimoqraadiyada, sinaanta iyo cadaalada iyo waliba dastuurka dalka iyagoo sidoo kale kudhawaaqayay ‘Guul XDSHSI, Guul xukuumada DDSI’.
Waxayna amaan, bogaadin iyo taageero balaadhan usoo jeediyeen Xisbiga EPRDF ee wadanka kuhogaaminaya nidaamka federalismka ah ee kusalaysan dimoqraadiyada, sinaanta iyo cadaalada islamarkaana uu dhex-yaalo dastuurka loo wada siman yahay. Waxayna taageero buuxda umuujiyeen xukuumada DDSI ee uu majaraha uhayo madaxwayne CMC.
Hadaba, xukuumada DDSI iyo XDSHSI oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaabogaadiyay banaanbaxan ay sameeyeen jaaliyadu isagoo ugu hambalyeeyay dhiirataanta ficilkooda ay muujiyeen islamarkaana umahadceliyay jaaliyada DDSI ee wadanka belgiumka. Wuxuuna talaabadooda kutilmaamay mid geesinimo, karti iyo ficil wadaniyadeed leh islamarkaana kudayasho mudan.